‘Kunenzondo ngoZuma noKhongolose’ | IOL Isolezwe
‘Kunenzondo ngoZuma noKhongolose’
Isolezwe / 31 December 2012, 2:45pm / MHLENGI SHANGASE
ISIHLONTI se-ANC esizozinza KwaZulu-Natal kuze kufike umgubho weminyaka engu-101 kwasungulwa i-ANC emgubheni ozoba seKings Park eThekwini ngoJanuwari 12.
UNOBHALA Jikelele wamaKhomanisi, uDkt Blade Nzimande, othi kukhona abanenzondo enkulu ngoMengameli Jacob Zuma abambiza ngamagama amaningi okubalwa kuwo nesiqhaza esithatha abafazi abaningi. Izithombe: SHAN PILLAY
UNOBHALA Jikelele wamaKhomanisi, uDkt Blade Nzimande, uthi kukhona abanenzondo ngoKhongolose nangoMengameli Jacob Zuma sengathi bathakathiwe.
UNzimande obenzele abantu abadala uKhisimusi kwaDambuza, eMgungundlovu, izolo uthe uZuma abanye bambiza ngamagama amaningi, bathi yisiqhaza esinamakhosikazi amaningi.
“Kunenzondo enkulu ebhekiswe kuMengameli we-ANC ungafunga ukuthi abantu bathakathiwe ngendlela abamzonda ngayo. Ziningi izinto esezenziwe nguMsholozi nobuholi obukhona njengokuthi kuphakelwa izingane ezingu-8 million nsuku zonke ezikoleni, kufakwe ugesi nokunye, ngakho ngeke kube wukuthi lo hulumeni awukaze wenze lutho, usebenzile,” kusho uNzimande engxongxweni abe nayo neSolezwe ngemuva kwalo mcimbi.
Kulo khisimusi kuhlomule abadala abahlwempu abangu-1 000 endaweni okungasebenzi ngisho umuntu oyedwa kuyona.
UNzimande uthe umhlonipha kakhulu oyiPhini likaMengameli wezwe, uMnuz Kgalema Motlanthe, nobuholi obukhethiwe eMangaung.
“Enye yezinto okumele umuntu ayisho wukuthi ngimhlonipha kakhulu uMkhuluwa. Ngesikhathi siya eMangaung asizange siphumele obala sisho ukuthi sifuna bani kodwa sahlonipha yonke imibono yabanye ngobuholi,” kusho uNzimande.
Uthe kulezi zinsuku uthathiswa okomuntu obuthuntu uma ungagxeki uhulumeni nsuku zonke.
“Uma nje ungavuki nsuku zonke ugxeke uhulumeni obusayo uthathiswa okomuntu obuthuntu. Ngeke mina ngikwenze lokho, ngigxeke uhulumeni singekho isidingo,” kusho uNzimande.
Uthe ngeke kuhlale kujikijelwana ngamazwi kepha kumele kuhlalwe phansi kubhungwe ngaphakathi ezinhlakeni zikahulumeni.
Ekhuluma emkhulekweni wokwamukela isihlonti se-ANC esizungeza izwe lonke, iPhini likaSihlalo we-ANC esifundazweni, uMnuz Willies Mchunu, uthe uyamhlonipha uMkhuluwa ngamava anawo nangeqhaza azolibamba ekufundiseni amalungu ngepolitiki.
UMchunu, obekhuluma eCity Hall khona eMgungundlovu izolo, uthe akubanga yiphutha ukukhethwa kwePhini likaMengameli we-ANC, uMnuz Cyril Ramaphosa.
“Amagatsha yiwona akhuluma, akubanga yiphutha ukuqokwa kukaRamaphosa njengePhini likaMengameli we-ANC eMangaung. Saya eMangaung siyimbumba njengesifundazwe sabuya naye uMgcinimafa uZweli Mkhize,” kusho uMchunu.
Uthe amalungu anomsebenzi wokukhiphela ngaphandle labo abenza inkohlakalo ngoba yenziwa ngumuntu oyedwa bese kupendeka wonke umuntu.
Lesi sihlonti sizozungeza izifunda ezehlukene zesifundazwe ngaphambi komgubho ozoba seKings Park, eThekwini, weminyaka engu-101 kwasungulwa uKhongolose.
Umgubho uzoba ngoJanuwari 12, kule nkundla kanti uZuma nguyena oyothula inkulumo yosuku.